Tsy hitondra olana fotsiny fa hitondra vahaolana ihany koa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Richard Rakoto il y a 17 jours
Efa ho herintaona mahery izao no nisy ity covid-19 ity teto amintsika. Tahaka izany ihany koa ny lanitsika, efa ho herintaona ihany koa no nikatonany. Izay no antony nangatahana fihaonana tamin’ity tompon’andraikitra amin’ny fitaterana ity. Hametraka fitarainana, tokony ho jerena ny mikasika ny fitaterana an’habakabaka ity. Efa betsaka ireo mitaraina ireo sehatra manodidina ity sehatra ity, ny fizahantany, ny vahoakan’ny Nosy-be efa nanao hetsika, mihetsika ny ireo sehatra miankina amin’ny fitaterana an’habakabaka izay azo lazaina fa andrin’ny sehatra maro, indrindra amin’ny lafiny fampandrosoana ara-toe-karena. Hifampiresaka sady hitondra vahaolana ihany koa. Ny fampanarahana ireo fepetra amin’ny fahasalamana dia misy ny tompon’andraikitra ny amin’izany, ny fanaovana ny taratasy isankarazany, ny fizaham-pahasalamana. Raha miparitaka ny aretina noho ny kinanga ataon’ny tompon’andraikitra sasany dia tsy anjaran’ny Tsaradia izany. Ny orinasa sy ny mpiasa ao no voasazy tsy miasa. Ny fahasahiranan’ny Airmad dia misy fiantraikany amin’ny mpiasa ao aminy ary koa amin’ireo asa miankina aminy, izay tena marobe tokoa raha tsy hiteny afa-tsy ny resaka fizahan-tany fotsiny. Tokony hisy amin’izay amin’izao fotoana ny fifampiresahana satria efa misokatra daholo ny eto anatiny amin’izao. « Jerena ihany koa izay tokony hanokafana ny lanitra, ahafahana miditra amin’izay amin’ny fampandrosoana manontolo fa tsy avela fotsiny hitadiavan’ny sasany tombontsoa manokana, raha misy mieritreritra izany any ambadika any » hoy Barson Rakotomanga, filohan’ny Randrana Sendikaly. « Raha tonga manatona aty amin’ny minisitera izahay tsy hitondra olana fotsiny fa hitondra vahaolana ihany koa » hoy ihany izy.
Tsy natao hampitolefika ny fahavoazana nentin’ny covid-19 fa vao mainka aza izany tokony hampitraka sy hanaovana ezaka misimisy kokoa. Tsy maintsy misy foana ny vahaolana amin’ny olana misy fa isika sisa no antony, hanao sa tsy hanao.